Madaxweyne Farmaajo oo Xasan Shiikh kula kulmay Turkiga - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne Farmaajo oo Xasan Shiikh kula kulmay Turkiga
July 10, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Ankara-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ku kulmay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, sida uu boggiisa Twitter-ka ku sheegay Farmaajo.
“Waxaan la kulmay madaxweynihii hore Mudane Xasan Shiikh Maxamuud. Waxaanu iska wareysannay horumarka, fursadaha iyo caqabadaha horyaalla dalkeenna, annaga oo isla qaadannay ahmiyadda iskaashiga iyo wada shaqeynta madaxda dalka si loo xaqiijiyo mustaqbal barwaaqo u horseeda dadkeenna.” Ayuu ku yiri qoraal uu boogiisa Twitter-ka soo dhiggay Madaxweynuhu.
Farmaajo ayaa Xasan Shiikh kaga adkaaday doorashadii madaxweynenimada Soomaaliya ee dhacday bishii Febaraayo 2017-kii.
Xasan Shiikh Maxamuud iyo qoyskiisa ayaa deganaansho ka helay dalka Turkiga.
Madaxweyne Farmaajo ayaa horaantii asbuucaan tagay Turkiga si uu uga qeybgalo caleemosaarka Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
October 15, 2017 Dadkii ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho oo Turkiga lagu daaweyn doono